China paoma paty 2200g orinasa mpamokatra sy mpanamboatra Voatabia
Ny paty voatabia dia iray amin'ny sakafo isan'andro. Izy io dia mety hahatonga ny sakafo ho matsiro sy mahasalama kokoa ho an'ny olona. Afaka manao kalitao isan-karazany isika araka ny fangatahan'ny mpanjifa sy ny fenitry ny kalitaon'ny tsena, ny paty dia tomaty loko mena voajanahary voajanahary, 100% tsy misy additives, matevina ary tsy misy rano. Afaka manao paty voatabia tsara GINO izahay.
Ny "kalitao voalohany" no fototray lalandava hanodinana ny paty voatabia.
Ny orinasanay dia manarona faritra 58.740 metatra toradroa, ny famokarana isan-taona ankehitriny dia 65.000 taonina, manana 9 paty voatabia am-bifotsy sy tsipika famokarana voatabia sachet 9 izahay, izay afaka vokatra miaraka amina karazana famaritana, toy ny paty voatabia am-bifotsy 70g, paty voatabia am-bifotsy 140g, 198g paty voatabia am-bifotsy, voatabia voatabia am-bifotsy 210g, paty voatabia am-bifotsy 400g, paty voatabia am-bifotsy 800g, paty voatabia am-bifotsy 830g, paty voatabia am-bifotsy 850g, patata voatabia am-bifotsy 1000g, pata voatabia am-bifotsy 2200g, 2.2kg + pata voatabia am-bifotsy 3 kg paty voatabia, paty voatabia am-bifotsy 4.5kg lehibe indrindra habe sns.
Ny tsenantsika lehibe dia saika firenena Afrika, Moyen Orient, Etazonia ary firenena Amerika Atsimo mihoatra ny firenena sy faritra 75.
Mampiasa ny masinina mandroso, milina fantsom-panafody izahay. Ny entana dia hifantoka bebe kokoa sy maina, ary be ny vokatra dia ho entina, afaka mitahiry vola bebe kokoa ho anao.
Ary ny takelaka rehetra misy fonosana seramika fotsy na mavo ao anatiny mba hisorohana ny harafesina ary hitazomana ny kalitaon'ny paty voatabia.
1. Afaka manome maimaimpoana ny mpanjifa amin'ny mpanjifa izahay, ny mpanjifa ihany no mila miatrika ny tahan'ny entana, ary inona koa, manana ny kaonty DHL anay misy fihenam-bidy 50% izahay, azonao atao koa ny mandoa anay ny entana mialoha ary avy eo mandefa anao izahay santionany amin'ny ny kaontinay, izay hitahiry vola be ho anao!
2. Ny fe-potoana fandoavam-bola dia 30% petra-bola sy fifandanjana hatao manohitra ny dika mitovy B / L, raha amin'ny L / C, mila manamarina indroa isika ary manamafy raha afaka manaiky.
3. Fotoana fanaterana: 30 andro aorian'ny fifanekena voamarina, voaraikitra ary voamarina ny marika.
4. SGS sy BV dia samy ekena, afaka mifandray amin'izy ireo fotsiny ianao raha mila izany.
5. Halal, ISO, HACCP ary FDA no misy.
6. Manana mpamorona matihanina manokana isika, afaka manao endrika tsara sy haingana kokoa.
Manaraka: Mametaka voatabia voafafa 70g
Mametaka voatabia isan-karazany
Pasta voatabia mifantoka indroa
Pasta voatabia saketa fisaka
Mametaka voatabia avo lenta
Kitapo Pasta voatabia
Mpamatsy Pasta voatabia China
Mametaka voatabia hatao saosy
Mametaka voatabia ambongadiny
Mametaka voatabia am-bifotsy 400g